Nnwom 42 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Meyi Onyankopɔn ayɛ sɛ me Nkwagye Kɛse
N’ani agyina Onyankopɔn sɛnea ɔwansan ani gyina nsu (1, 2)
“Adɛn nti na mabotow?” (5, 11)
“Twɛn Onyankopɔn” (5, 11)
Wɔde ma dwom kyerɛfo. Kora mma dwom. Maskil.*+ 42 O Onyankopɔn, m’ani* agyina woSɛnea ɔwansan ani gyina nsu. 2 Onyankopɔn a ɔyɛ Onyankopɔn teasefo no ho sukɔm de me.*+ Da bɛn na mɛkɔ akogyina Onyankopɔn anim?+ 3 Me nisu adan m’aduan awia ne anadwo;Daa nkurɔfo di me ho fɛw sɛ: “Wo Nyankopɔn no wɔ he?”+ 4 Sɛ mekae saa nneɛma yi a, mihwie me koma mu nsɛm gu hɔ.*Efisɛ bere bi me ne nnipadɔm no boom nantewee;Midii wɔn anim ne wɔn nantew komm* kɔɔ Onyankopɔn fi.Yɛde ahurusi ne aseda nne na ɛkɔeSɛ nnipakuw a wɔrehyɛ fã.+ 5 Adɛn nti na mabotow?*+ Adɛn nti na mahaw saa? Twɛn Onyankopɔn,+Na mɛkɔ so ayi no ayɛ sɛ me Nkwagye Kɛse.+ 6 Me Nyankopɔn, mabotow.*+ Enti mekae wo+Wɔ Yordan asaase ne Hermon mmepɔw so,Misar Bepɔw* so. 7 Wo nsu a ebu fa so nnyigyei nti,Asorɔkye ma so a, na asorɔkye agye so. W’asorɔkye akɛse no nyinaa abu afa me so.+ 8 Yehowa bɛda ne dɔ a enni huammɔ adi akyerɛ me adekyee,Na mɛto ne dwom anadwo; ɛyɛ mpae a mɛbɔ me nkwagye Nyankopɔn no.+ 9 Mebisa Onyankopɔn, me botan no sɛ: “Adɛn nti na wo werɛ afi me?+ Adɛn na atamfo nhyɛso nti mede awerɛhow nenam?”+ 10 M’atamfo kyi me kɔkɔkɔkɔ, enti wodi me ho fɛw;*Daa wodi me ho fɛw sɛ: “Wo Nyankopɔn no wɔ he?”+ 11 Adɛn nti na mabotow?* Adɛn nti na mahaw saa? Twɛn Onyankopɔn,+Na mɛkɔ so ayi no ayɛ sɛ me Nkwagye Kɛse ne me Nyankopɔn.+
^ Anaa “de me kra.”
^ Anaa “mihwie me kra gu hɔ.”
^ Anaa “bɔkɔɔ.”
^ Anaa “Bepɔw ketewa no.”
^ Ebetumi nso akyerɛ,“M’atamfo di me ho fɛw te sɛ nea wɔrebubu me nnompe mu.”